Mmekọrita: Kpọkọta netwọkụ gị iji mechie mmekọrịta ndị ọzọ na mmekọrịta a na ọgụgụ isi Platform na nchịkọta | Martech Zone
Mmekọrita: Kpọkọta netwọkụ gị iji mechie azụmaahịa ndị a na Platform Intelligence Platform na Analytics
Friday, April 30, 2021 Friday, April 30, 2021 Douglas Karr
Ọkara njikwa mmekọrịta ndị ahịa (CRM) ngwọta bụ ihe ngosi mara mma nke ọma… nchekwa data nke njikọ, ọrụ ha, na; ikekwe, ụfọdụ njikọta na sistemụ ndị ọzọ na-enye nghọta ọzọ ma ọ bụ ohere azụmaahịa. N'otu oge, njikọ ọ bụla dị na nchekwa data gị nwere njikọ siri ike, na-emetụta ndị ahịa ndị ọzọ na ndị na-eme mkpebi azụmaahịa. Mgbatị a nke netwọkụ gị emeghebeghị, agbanyeghị.
Gịnị bụ mmekọrịta ọgụgụ isi?
Mmekọrịta ọgụgụ isi teknụzụ na-enyocha data nkwukọrịta nke otu gị ma mepụta eserese mmekọrịta achọrọ iji nweta ihe azụmaahịa. Mmekọrịta eserese na-egosipụta echiche zuru oke banyere ndị otu gị maara na etu ha si mara ha nke ọma, si otú a na-egosi gị ụzọ kachasị mma iji webata ma ọ bụ zoo aka.
Why Account-based Marketing and Relationship Intelligence bụ ọgbakọ zuru oke
Affinity dị ka ngwakọta nke LinkedIn na Salesforce, naanị na ọgụgụ isi nke Artificial iji ghọta ike mmekọrịta (n'adịghị ka LI) yana iji ngwaọrụ akpaaka wepụ ihe mgbu na njikwa CRM. Technologylọ ọrụ na-ahụ maka teknụzụ nke ụlọ ọrụ na nyocha ihe karịrị otu ijeri data data n'ofe ozi ịntanetị, kalenda, na isi mmalite nke ndị ọzọ iji nye ndị ọrụ ngwaọrụ ha chọrọ iji jikwaa mmekọrịta ha kachasị baa uru, butere njikọ dị mkpa ụzọ, ma chọpụta ohere ndị a na-emeghebeghị.
mmekọrita na-akpaghị aka na-ejide mmekọrịta ọ bụla ndị otu gị nwere kọntaktị ma ọ bụ nzukọ. Ọ na-emekwa ka profaịlụ ọ bụla baa uru na nkọwa mmekọrịta dị mkpa nke enweghị ike ịgụnye na isi data data ndị ọzọ dịka Crunchbase, Clearbit, yana usoro data nke aka gị.
mmekọrita retroactively emepụta a mebere Rolodex ụlọ ọrụ niile na ndị otu gị na-emekọrịta ma melite ya na oge.
Mmekọrita Alliance na-enye gị ohere ịme jikọọ na ndị ọzọ na mpụga nke otu gị ịghọta onye na netwọkụ gị nwere ike iweta mmeghe dị oke ọnụ ahịa.
Nkọwapụta mmekọrita bụ ihe pụrụ iche, ezigbo oge na-akọ akụkọ nke na-enye nghọta nke ụlọ ọrụ na mmekọrịta dị na mpụga otu yana etu mmekọrịta ha siri emetụta azụmahịa ụlọ ọrụ, pipeline, ọrụ netwọkụ, na akara ngosi arụmọrụ ndị ọzọ. Ugbu a dị site na ijikọta ya na ọgụgụ isi azụmaahịa na nchịkọta nyocha sitere na igwe ojii Google, Anya, Analytics Affinity Analytics na-abịa dị ka akụkụ dị iche iche nke mbipụta Premium na Enterprise nke Affinity platform ma ọ bụ dị ka nwelite maka ndị ahịa Ọkachamara.
Nkọwapụta mmekọrita na-ewuli elu na isi data dị na mmekọrita mmekọrịta mmekọrịta ọgụgụ isi iji nye nghọta miri emi karị n'ime otu data CRM. Ọ bụ ezie na ọtụtụ nyiwe CRM na-enye naanị ihe ndị bụ isi, ikike ịkọ akụkọ elementrị, Analytics Affinity na-enye dashboards na granular n'ụzọ zuru ezu, ezigbo oge iji nyere ụlọ ọrụ aka ịme nyocha miri emi na ọnọdụ na ndị ọkwọ ụgbọ ala na-emetụta usoro azụmahịa dị oke mkpa.
Enwere ihe karịrị akụkọ ngosi ngosi 20 dị na ndepụta ọ bụla n'ime mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta. Enwere ike ịgbanye akụkọ niile miri emi dabere na ngalaba ọdịnala dịka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, ụdị ụlọ ọrụ, nha ụlọ ọrụ, na ihe ndị ọzọ. Ndị ọrụ nwere ike ibupụ ma ọ bụ zite ozi ọ bụla iji kọọrọ ha ndị nwere oke isi.
Nchịkọta data egosipụtara na-enye ụlọ ọrụ ezigbo oge ọhụụ n'ime arụmọrụ nke otu ha ma mee ka ha nwee ike ịkụbanye na data ahụ ka ha nwee ike ịza ajụjụ maka ebe na otu esi etinye ego na mbọ ha. Ezie na ulo oru nwere ike iru ọ bụla ọnụ ọgụgụ nke customizable akụkọ na Affinity Analytics, abụọ nke tupu-packaged akụkọ na-agụnye:
Nnyocha Funnel: Na-enyere ụlọ ọrụ aka ịlele arụmọrụ nke pipeline ha site na nyochaa usoro ọ bụla nke usoro azụmahịa ahụ, gụnyere ọnụego ntụgharị maka ọkwa ọ bụla, oge nkezi nke azụmahịa na-anọ na ọkwa nke ọ bụla, ọrụ ikpeazụ tupu emeri ma ọ bụ furu efu, ebe azụmahịa kacha mma dị a na-esite na ya, na ndị ọzọ.
Nkwupụta Ọrụ Ọrụ Otu: Na-enye nyocha nke ozi ịntanetị nke otu, oku, nzukọ na ihe ndị ọzọ, nke ụlọ ọrụ, mpaghara, na ndị ọzọ mebiri, iji nye nghọta dị oke mkpa na arụmọrụ otu yana ọganiihu ma ọ bụ adịghị ike nke mmekọrịta ha na atụmanya ma ọ bụ kọntaktị.
The Affinity platform na-enyere ndị ọrụ aka ijikwa mmekọrịta gafere nde mmadụ 30 na nde 7 nde. Site na nchịkọta gbasara mmekọrita, ndị ọrụ nwere nghọta ọzọ na mmekọrịta ha na ndị ana-akpọ na mpụga na etu esi arụ ọrụ ndị ahụ iji melite njikwa na njikwa pipeline.
Gụkwuo Banyere mmekọrita Gụkwuo Banyere gbasara mmekọrita Analytics
Tags: mmekọritammekọrita nyochaaiAmamịghe echicheCRMdata crmnjikwa mmekọrịta ndị ahịafoneelu nyochaonye nleremmekọrịta ọgụgụ isimmekọrịta ọgụgụ isi n'elu ikpo okwuọrụ otu ahịa
Douglas Karr Friday, April 30, 2021 Friday, April 30, 2021
Igwe ojii MOLOCO: Data-Driven, AI-Powered Mobile Ad Solutions for Mobile Apps
Visme: Ngwá Ọrụ Ike maka Creatmepụta Ọdịnaya Visual Dị egwu
Wendy Covey: Otu ụlọ ọrụ teknụzụ na injinịa na-arụ ọrụ na azụmaahịa dijitalụ iji bulie azụmaahịa azụmahịa
na nke a Martech Zone Ajụjụ ọnụ, anyị na-agwa Wendy Covey, onye edemede, ọkà okwu, na ngalaba-onye guzobere Trew Marketing (https://www.trewmarketing.com). Wlọ ọrụ Wendy na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ teknụzụ (azụmaahịa, injinia imepụta, imepụta ihe) na-enyere ha aka ịbanye mbubata ụzọ mbata site na atụmatụ azụmaahịa dijitalụ. Ọ bụ ezie na omume ịzụrụ B2B agbanweela kemgbe afọ ebe ụlọ ọrụ na-enyocha ma na-aga n'ihu na…
Tyler Ludlow: Nkà na Science nke Mbugharị site na Mkpebi gaa doo anya
na nke a Martech Zone Ajụjụ ọnụ, anyị na-agwa Tyler Ludlow, Onye guzobere na Chief Mkpebi Scientist nke Mkpebi Nkà Iwu. Na oge dijitalụ, ndị na-ere ahịa na ndị isi ahịa na-eche mkpebi ihu kwa ụbọchị. Tyler na-enye usoro maka azụmaahịa iji doo anya na mkpebi ha. Tyler na-atụle ihe mkpebi sayensị bụ, njikọ dị n'etiti…